UBenazir Bhutto - owayengumongameli wePakistan
UBenazir Bhutto wazalwa kwelinye lezintlu zezopolitiko ezinkulu zaseMzantsi Asia, elilingana nePakistan le-Nehru / Gandhi ubukhosi baseIndiya . Uyise wayengumongameli wasePakistan ukususela ngo-1971 ukuya ku-1973, kunye noNdunankulu ukususela ngo-1973 ukuya ku-1977; Uyise, naye, wayengumbongameli welizwe elincinci ngaphambi kokuzimela kunye neSahlulo seNdiya .
Iipolitiki ePakistan, nangona kunjalo, ngumdlalo onobungozi. Ekugqibeleni, uBenazir, uyise, kunye nabazalwana bakhe bobabili baya kufa.
UBenazir Bhutto wazalwa ngoJuni 21, 1953 eKarachi, ePakistan, umntwana wokuqala weZulfikar Ali Bhutto kunye noBegum Nusrat Ispahani. UNusrat wayevela e- Iran , kwaye wayesebenzisa uShi'a Islam , ngelixa umyeni wakhe (kunye nabanye abaninzi basePakistani) baqhuba iSunni Islam. Bavusa uBenazir kunye nabanye abantwana babo njengeSunni kodwa ngeendlela ezivulekileyo nezingezizo iimfundiso.
Esi sibini sasiza kuba noonyana ababini kunye nentombi enye: UMurtaza (owazalwa ngo-1954), intombi kaSanam (owazalwa ngo-1957) no-Shahnawaz (owazalwa ngo-1958). Njengomntwana omdala, uBenazir kulindeleke ukuba enze kakuhle kakhulu kwizifundo zakhe, kungakhathaliseki ukuba ubulili bakhe.
UBenazir waya esikolweni eKarachi ngokusebenzisa isikolo esiphakamileyo, waya kwiKholeji yaseRadcliffe (ngoku iyingxenye yeYunivesithi yaseHarvard ) eUnited States, apho wayefundela urhulumente othelekisa. UBhutto kamva wathi amava akhe eBoston aqinisekisa kwakhona inkolelo yakhe kumandla wentando yeninzi.
Emva kokugqitywa kwiRadcliffe ngowe-1973, uBenazir Bhutto wachitha iminyaka eyongezelelweyo efundayo kwiYunivesithi yaseOxford eBrithani enkulu.
Wathatha iindidi ezahlukahlukeneyo kumthetho wamazwe ngamazwe kunye nezopolitiko, ezoqoqosho, ifilosofi kunye nezopolitiko.
Iminyaka emine ukuya kwizifundo zeBenazir eNgilani, umkhosi wasePakistani wagqithisa urhulumente kayise ekubambeni. Umkhokeli wenkokheli, uGeneral Muhammad Zia-ul-Haq, wamisela umthetho we-karate ePakistan waza uZulfikar Ali Bhutto wabanjelwa kwiimali zoluhlu lweqhinga.
UBenazir wabuyela ekhaya, apho yena nomntakwabo uMurtaza basebenzela iinyanga ezili-18 ukuze bahambisane nembono yoluntu ngokuxhaswa nguyise oyisejele. INkundla ePhakamileyo yasePakistan, okwangoku, wagwetywa uZulfikar Ali Bhutto weqhinga lokubulala kwaye wamgweba ngokufa.
Ngenxa yokusebenza kwabo egameni likayise, uBenazir noMurtaza babekwe phantsi kokubanjwa kwendlu kunye nangaphezulu. Njengoko u-Zulfikar wanyulwa ngomhla ka-Ephreli 4, 1979, wasondela, uBenazir, unina kunye nabantakwabo abancinci bonke babanjwe bavalelwa entolongweni yamapolisa.
Ngaphandle kwesibalo samazwe ngamazwe, urhulumente kaZia u-Zia waxhoma uZulfikar Ali Bhutto ngo-Ephreli 4, 1979. UBenazir, umntakwabo kunye nonina babesentolongweni ngelo xesha kwaye babengavumelekile ukuba balungiselele umzimba we-prime minister for the burial ngokuhambelana nomthetho wamaSilam .
Xa i-Bhutto yasePakistan Abantu Iqela (PPP) liphumelele ukhetho lwengingqi olusasazekayo, uZia wanqanda ukhetho lukazwelonke kwaye wathumela amalungu asele eBhutto entolongweni eLarkana, malunga neekhilomitha ezingama-460 (285 miles) ngasentla kweKarachi.
Kwiminyaka emihlanu ezayo, uBenazir Bhutto uza kubanjelwa entolongweni okanye ekugcinweni kwendlu. Eyona nto yayibonakala yintolongo entlango eSukur, apho yayibanjelwe khona yedwa kwinyanga ezintandathu zango-1981, kubandakanywa ukushisa kwehlobo.
Ehlanjululwa yizinambuzane, kunye neenwele zakhe ziphuma kunye nolusu lukhuphuka kwiindawo zokushisa, iBhutto kwafuneka ukuba abe esibhedlele kwiinyanga eziliqela emva kweli thuba.
Emva kokuba iBenazir ifunyenwe ngokufanelekileyo kwixesha lakhe kwiJaji laseSukur, urhulumente kaZia wamthuma kwiJaji yaseKarachi, waya eLarkana kwakhona, wabuyela eKarachi phantsi kokuboshwa kwendlu. Okwangoku, unina, owayeye wabanjwa eSukur, wafumanisa ukuba unomdlavuza wamaphaphu. UBenazir ngokwakhe wayesebenze ingxaki yengqondo yangaphakathi eyayidinga ukuhlinzwa.
Uxinzelelo lwamazwe ngamazwe luya kuZia ukuba avumele ukuba bashiye ePakistan bafune unyango. Ekugqibeleni, emva kweminyaka emithandathu yokuhambisa intsapho yaseBhutto kwindlela enye yokuvalelwa entolongweni ukuya kulandelayo, uGeneral Zia wawavumela ukuba bathathwe ukuze bathathe unyango.
UBenazir Bhutto nonina baya eLondon ngoJanuwari ka-1984 ukuze baqale ukuthunjelwa kwabo.
Ngokukhawuleza ukuba ingxaki yendlebe kaBenazir yalungiswa, waqala ukuxhasa uluntu ulawulo lukaZia.
Ingxaki yathintela intsapho kwakhona ngoJulayi 18, 1985. Emva kwepikiniki yasekhaya, umntakwabo omncinci uBenazir, u-Shah Nawaz Bhutto, oneminyaka engama-27 ubudala, wabulawa yityhefu ekhaya lakhe eFransi. Intsapho yakhe ikholelwa ukuba umfazi wakhe waseKhanan, uRehana, wabulala u-Shah Nawaz ekugqibeleni ubukhosi bukaZia; nangona amapolisa aseFransi ambopha esitokisini ixesha elingaphandle, akukho namacala athathwe ngaye.
Nangona wayekhathazekile, uBenazir Bhutto waqhubeka nokubandakanyeka kwezopolitiko. Waba yinkokheli ekuthunjweni kwePatistan abantu bakaParti.
Umtshato & Ubomi Bentsapho
Phakathi kokubulawa kwabazalwana bakhe abasondeleyo kunye neshedyuli yezobupolitika e-Benazir exakekile, wayenalo ixesha lokuthandana okanye ukuhlangana nabantu. Enyanisweni, ngexesha lokungena kwakhe kuma-30, uBenazir Bhutto wayeqale ukucinga ukuba akaze ashade; Izopolitiko ziya kuba ngumsebenzi wobomi bakhe kunye nothando kuphela. Nangona kunjalo, intsapho yakhe inezinye iimbono.
U-Antie ukhuthaze omnye uSindhi kunye no-scion wentsapho ehleliyo, insizwa egama linguAsif Ali Zardari. UBenazir wenqabile ukudibana naye ekuqaleni, kodwa emva kokuzama ukulungiswa yintsapho yakhe kunye naye, umtshato walungiswa (nangona uBenzir wayengumfazi wesimo somtshato). Umtshato wawuvuyayo, kwaye lo mbini unabantwana abathathu - unyana, uBilawal (owazalwa ngo-1988) kunye neentombi ezimbini, iBabhtawar (owazalwa ngo-1990) kunye no-Afafa (owazalwa ngo-1993). Babethembele intsapho enkulu, kodwa u-Asif Zardari wayevalelwe iminyaka eyisixhenxe, ngoko bebengakwazi ukufumana abantwana abaninzi.
Ukubuyela kunye noNyulo njengoNdunankulu
Ngomhla ka-Agasti 17, 1988, i-Bhuttos yafumana inceba evela emazulwini, njengokuba kunjalo. I-C-130 ethwele uNdunankulu uMuhammad Zia-ul-Haq kunye nabaphathi bakhe abakhulu bezempi, kunye ne-ambassador yase-US ePakistan uArnold Lewis Raphel, waphahla ngaseBawalwalpur, kwiphondo lasePunjab yasePakistan. Akukho sizathu esilungileyo esasisungulwa, nangona iingcamango zazibandakanya isisombululo, isiteleka se-missile, okanye umqhubi wokuzibulala. Noko ke, ukuhluleka komatshini okulula kubonakala kunokwenzeka.
Ukufa kuka-Zia ngokungalindelekanga kwasusa indlela yokuba uBenazir nonina baholele iPPP ekuphumeleleni kwintlanganiso yepalamente kaNovemba 16, 1988. UBenazir waba ngu-11 wePakistan intloko-ntloko ngomhla kaDisemba 2, 1988. Akayena kuphela umphathiswa we-Pakistan wokuqala, kunye nomfazi wokuqala ukukhokela isizwe samaSulumane kumaxesha anamhlanje. Wagxininisa ekuhlaziyweni kwezentlalo kunye nezopolitiko, ezibeka ezinye iinkolitiki zemveli okanye zamaSulumane.
UNdunankulu uBhutto wayejongene neengxaki zeenkqubo zamazwe ngamazwe ngexesha lokuqala kwakhe kwi-ofisi, kubandakanywa ukuhoxiswa kweSoviet kunye ne-Amerika ukusuka e- Afghanistan kunye neengxaki ezibangelwa yi- Afghanistan . I-Bhutto yafikelela e- Indiya , yamisela ubudlelwane obuhle kunye noNdunankulu uRajv Gandhi, kodwa le nyathelo yahluleka xa ivotelwe ngaphandle kweofisi, yaza yabulawa yiTamil Tigers ngo-1991.
Ubuhlobo bePakistan kunye neUnited States, sele sele bujongene nemeko e-Afghanistan, yaqhekeza ngokupheleleyo ngo-1990 malunga nokukhutshwa kwezixhobo zenukliya .
UBenazir Bhutto wayekholelwa ngokuqinisekileyo ukuba iPakistan yayidinga ukukhuseleka kwenyunyukliya, ekubeni iNdiya yayiye yavavanya ibhomu yenyukliya ngowe-1974.
Ngaphambili, uNdunankulu uBhutto wazama ukuphucula amalungelo abantu kunye nesimo sabasetyhini basePakistan. Wabuyisela inkululeko yecindezelo kwaye wavumela imibutho yabasebenzi kunye namaqela abafundi ukuba bahlangane ngokukhululekile kwakhona.
UNdunankulu uBhutto usebenza ngokunyanisekileyo ukuze athathaka umongameli ongu-Pakistani, uGhulam Ishaq Khan, kunye nabadibaniselwano bakhe. Nangona kunjalo, iKhan enegunya lokuvota phezu kwezenzo zepalamente, ezithintela kakhulu uBenazir ukuphumelela kwimicimbi yezopolitiko.
NgoNovemba ka-1990, uKhan wamgxotha uBenazir Bhutto kwiNdunankulu yoBulungiseleli waza wabiza ukhetho olutsha. Wahlawuliswa ngorhwaphilizo kunye nokuzikhethela phantsi koLungiso lwesisithandathu kuMgaqo-siseko wasePakistan; UBhutto wayehlala ehlala egcina ukuba iintlawulo zazingekho kwezopolitiko.
Ipalamente enolondolozo uNazaz Sharif waba nguNkulumbuso entsha, ngoxa uBenazir Bhutto wayexhomekeke ekubeni yinkokheli yenkcaso iminyaka emihlanu. Xa uSharif naye ezama ukuphelisa uhlengahlengiso lwesithandathu, uMongameli uGhulam Ishaq Khan wasebenzisa ukuba akhumbule urhulumente wakhe ngo-1993, njengoko wayekwenzile kuRhulumente waseBhutto iminyaka emithathu ngaphambili. Ngenxa yoko, uBhutto noSharif bahlangene ukuxosha uMongameli Khan ngo-1993.
Ikota lesibini njengoNkulumbuso
Ngo-Oktobha ka-1993, i-PPP ye-Benazir Bhutto inamalungu amaninzi eephalamende kwaye yakha urhulumente wabumbano. Kwakhona, uBhutto waba ngumbongameli. Umviwa okhethwe ngesandla ngesandla sokuba ngumbongameli, Farooq Leghari, wathatha isikhundla kwiKhan.
Ngo-1995, isicatshulwa sokuxoshwa kweBhutto kwintambo yempi yabonakala, kwaye iinkokheli zazama kwaye zavalelwa izivakalisi zeminyaka emibili ukuya kweyesine. Abanye ababukeleyo bakholelwa ukuba ukukhwabanisa kwakusisiseko sokuba uBenazir aphephe impi yabanye bachasene naye. Ngakolunye uhlangothi, wayenolwazi lokuqala ngengozi yempi yokulwa, ingaqwalasela isifo sikayise.
Ingozi yabetha iBhuttos kwakhona ngoSeptemba 20, 1996, xa amaphoyisa aseKarachi abulala umzalwana kaBenazir, uMir Ghulam Murtaza Bhutto. UMurtaza wayengazange ahambe kakuhle nomyeni kaBenazir, okwakubangela ukuba iimbambano zenzelwe ukubulawa. Nangona umama kaBenazir Bhutto unqumle unkulumbuso kunye nomyeni wakhe wokubangela ukufa kukaMurtaza.
Ngo-1997, uNdunankulu uBenazir Bhutto wagxothwa emsebenzini kwakhona, ngeli xesha nguMongameli Leghari, owayemxhasa. Kwakhona, wahlawuliswa ngenkohlakalo; Indoda yakhe, u-Asif Ali Zardari, nayo ibandakanyeka. Umthetho u-Leghari ukholelwa ukuba le ndoda ibandakanyeka ekubulaweni kukaMurtaza Bhutto.
Ukugqithiselwa Kanye Ngaphezulu
UBenazir Bhutto wayemele ukhetho lwepalamente ngoFebhuwari ka-1997 kodwa wahlulwa. Okwangoku, umyeni wakhe wayebanjwe ezama ukuza eDaibra waza wagwetshwa inkohlakalo. Ngethuba etilongweni, uZardari wayinqoba isihlalo sepalamente.
Ngo-Ephreli ka-1999, bobabini uBenazir Bhutto no-Asif Ali Zardari bahlawuliswa ngorhwaphilizo kwaye bahlawuliswa imali eyi-8.6 yezigidi ze-US nganye. Bobabini bagwetywa iminyaka emihlanu entolongweni. Nangona kunjalo, uBhutto wayesele e-Dubai, enqaba ukuyibuyisela ePakistan, ngoko ke uZardari kuphela wakhonza isigwebo sakhe. Ngo-2004, emva kokukhululwa kwakhe, wajoyina umfazi wakhe ekuthinjweni e-Dubai.
Ngo-Oktobha 5, 2007, uMongameli kunye noMongameli uPervez Musharraf banikezele uBenzir Bhutto intethelelo kuzo zonke iinkohlakalo zakhe. Kwiiveki ezimbini kamva, uBhutto wabuyela ePakistan ukukhankasela ukhetho luka-2008. Ngomhla wafika eKarachi, ibhomu le-suicide lahlasela i-convoy yakhe ejikelezwe ngabantu abanqwenela kakuhle, babulala 136 kwaye balimala i-450; I-Bhutto yaphunyuka ingaphumeleli.
Ekuphenduleni, uMurharf wachaza imeko yongxamiseko ngoNovemba 3. UBhutto wagxeba ukuvakaliswa kwaye wabizwa ngokuthi ngu Musharraf umlawuli wecawa. Kwiintsuku ezintlanu kamva, uBenazir Bhutto wafakwa phantsi kokubanjwa kwindlu ukukhusela ukuba ahlanganisane nabalandeli bakhe kwimeko yengxamiseko.
UBhutto wakhululwa ekubanjweni kwindlu ngolu suku olulandelayo, kodwa imeko yongxamiseko yahlala isasebenza kwaDisemba 16, 2007. Kodwa ke, okwangoku, u-Musharraf washiya isikhundla sakhe njengomkhosi jikelele emkhosini, eqinisekisa injongo yakhe yokulawula njengoluntu .
Ukubulawa kukaBenazir Bhutto
NgoDisemba 27, 2007, iBhutto yabonakala kwintlanganiso yokhetho kwi-park eyaziwa ngokuba nguLiaquat National Bagh eRawalpindi. Njengoko wayeshiya i-rally, wavuka ukuze atshintshele kubaxhasayo ngokushona kwelanga kwe-SUV yakhe. Umsundu wamdubula ngokuphindwe kathathu, kwaye izibhamu zaphuma zonke izithuthi.
Abantu abangamashumi amabini bafa kuloo ndawo; UBenazir Bhutto wadlula malunga neyure kamva esibhedlele. Isizathu sakhe sokufa asizange sibe ngamanxeba okubhokoxa kodwa kunokuba sisichukumise intloko. Ukuqhuma kwezinto eziqhubhisayo kwaye kwagubha intloko yakhe emngceleni welokushona kwelanga ngamandla amakhulu.
UBenazir Bhutto wafa eneminyaka engama-54 ubudala, washiya ifa eliyinkimbinkimbi. Iindleko zorhwaphilizo ezixhaswe kumyeni wakhe kunye naye ngokwabo azibonakali ukuba zenzelwe iinjongo zezopolitiko, nangona iBhutto ayifumene nokuchasene naye. Singaze sazi ukuba ngaba wayenolwazi olungaphambili malunga nokubulawa komntakwabo.
Ekugqibeleni, akukho mntu unokubuza ubulumko bukaBenazir Bhutto. Yena nentsapho yakhe banyamezela ubunzima obukhulu, kwaye nayiphi na iiphene zakhe njengenkokeli, ngokwenene wazama ukuphucula ubomi kubantu basePakistan.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga nabasemagunyeni aseAsia, bonani lolu uludwe lwabaSebenzi beeNtloko zaseburhulumenteni .
Bahadur, Kalim. Idemokhrasi ePakistan: Iingxaki kunye neengxabano , eNew Delhi: I-Har-Anand Publications, ngo-1998.
"Isiqhelo: UBenazir Bhutto," i-BBC News, Dec. 27, 2007.
Bhutto, Benazir. Intombi yeTshabalalo: I-Autobiography , yesi-2nd ed, eNew York: UHarper Collins, ngo-2008.
Bhutto, Benazir. Ukuxolelana: i-Islam, iDemokhrasi kunye neNtshona , eNew York: Harper Collins, ngo-2008.
Englar, uMary. UBenazir Bhutto: uNkulumbuso wasePakistan kunye noMmeli , iMinneapolis, MN: Iincwadi zeCompass Point, ngo-2006.
Imida (Ifomathi yoBumbe) Inkcazo
Iindaba zeTerbium - Tb Facts
Yiyiphi Imimiselo Yomdaka?
Yintoni ehloniphekileyo kwiGalofu?
Isiqhamo soMoya weBhayibhile: Ukuthembeka
10 Iinkcukacha NgeDiprotodon, i-Giant Wombat